Akulona isofthiwe nje kwaqondana computer ingxenye enkulu akuzona khulula. izinhlelo Quality zidinga Abadali zabo umsebenzi onzima, zona ungathanda ukuthola imali. Ngeshwa, ezweni lanamuhla izinhlelo ezinhle ngempela hhayi okungaka, kodwa ngoba ngokuvamile sibhekene isidingo ukususa izicelo engadingekile kakade. Kodwa umsebenzi "nokususa izinhlelo ngokuvamile kusuka kukhompyutha yakho" kuyinkinga real Wabasaqalayo.
Ngeshwa, akuyona yonke eqhubeka ukwazi ukuthi awukwazi ukususa uhlelo ngokusula amafolda zabo. Futhi akusiyo ngakho ezingavamile njengoba oyifunayo. Ngenxa "umbuso" ukuphahlazeka zenzeka kanye ulenga ikhompyutha, uhlelo iqala ukuba baziphathe kabi. Kungakhathaliseki ukuthi kuwubuwula, kodwa abaningi bakhetha nje asole konke namaqhinga amagciwane ezinonya, nakuba nge diversions kukhompyutha yakho siqu kanye ukuba babhekane ngokwabo. Ngakho indlela yokwenza izinhlelo ukususwa efanele kusuka kwikhompyutha yakho?
Lena akunandaba ngempela. Uma awudingi ukuthi ube kunoma uluphi uhlelo lokusebenza, kufanele chofoza inkinobho "Qala", khetha lapho "Control Panel", vula isixhumanisi "Izinhlelo kanye Izici". Lokhu kuvula ibhokisi lengxoxo noma Susa Izinhlelo. Phakathi uhlu lwazo zonke isofthiwe efakwe kwi computer ukuthola omunye ufuna ukususa, chofoza kukho inkinobho yegundane kwesokudla bese ku okuholela imenyu yengqikithi, chofoza "Shintsha / Susa". Lokhu kuzoqala Isikhiphi ejwayelekile ukuthi yenza Engeza noma Susa Izinhlelo kusuka kwikhompyutha yakho.
Uma ngasizathu simbe awuke uhlu lwamagama wathola isofthiwe engadingeki Ungazama ukuyisusa ngenye indlela. Okokuqala, kumelwe sibheke uhlelo disk ifolda Uhlelo Amafayela, futhi kulo ukuthola ikhathalogi okuqondene uhlelo, okuyinto "wagwetshwa" lokukususa. Kuyo nakanjani uyokwazi ukubona uhlobo lwefayela ngokuthi Khipha. Ukuchofoza kabili nge igundane, uqala inqubo ukususwa. Kodwa nokususa izinhlelo kusuka kwikhompyutha yakho akuyona njalo kuqondile ngakho futhi akusho ngaso sonke isikhathi.
Kaningi kuyenzeka ukuthi ifayela obhekene inqubo ukususwa isicelo olahlekile noma ilimele ngamagciwane. Ngaphezu kwalokho, i-Inthanethi ngokuvamile utholakala "zobuciko" enjalo zabaculi abacula umculo ocishe ezingaziwa, ekuqaleni ababa ayikwazi ukususwa endleleni efanele. Ngakho ukwenza abadali zonke izinhlobo izinhlelo zokukhangisa, "Amabha" zezikhangisoezipheqululini nezinye udoti ulwazi. Kulokhu, ungasiza uhlelo ukususa lolu hlelo kusuka kwikhompyutha yakho.
Ngokwesibonelo, abameleli ezahlukene lolu hlobo izicelo zingamathuluzi Revo Isikhiphi Pro, Isikhiphi lakho, Ashampoo Isikhiphi nabanye. Ngelilodwa nje, ukusesha kwi-Inthanethi noma yiluphi uhlelo lapho lomculi Isikhiphi samanje, usuke okuqinisekisiwe ukuthola eyiyona mpela. yokusebenza yabo isimiso ukuthi igama isicelo ufuna ukususa, olwenziwa bacwaninge nzulu lonke hard drive. Uthole i-"imisila" isicelo ziyasuswa ngokuphepha. Isimiso esinjalo ukuze ususe kusukela uhlelo lwekhompyutha kungaluqinisa kakhulu ukusiza ezimweni eziningi. Nge ukusetshenziswa njalo amabhuleki, uyolikhohlwa mayelana nekhompyutha.
Isixazululo sokubunjwa ezindongeni: amathiphu awusizo
Mangaki ama-calories ku-sushi? Uzokwaziswa izazi abanolwazi